Ozi Ecuador nke Ofesi: Assange nyere ụmụ amaala Ecuador ikike
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ihe Ndị Ruuru Mmadụ » Ozi Ecuador nke Ofesi: Assange nyere ụmụ amaala Ecuador ikike
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ gbasara Ekwedọọ • Akụkọ Ọchịchị • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • News • ndị mmadụ • trending Ugbu a • Akụkọ UK na -agbasa
Ministrylọ ọrụ na-ahụ maka okwu na mba ofesi na Ecuador (MFA) kwuru na ha enyela Julian Assange ikike ịbụ mba. Mmeghachi omume nke MFA na-abịa otu ụbọchị mgbe Quito kwupụtara inye ID na Assange kaadị ID.
Paspọtụ ahụ nwere ike nweta ihe mbụ ọ ga-eme iji nweta mmachi nke ndị nnọchi anya gọọmentị, dịka Ecuador chọrọ idozi ọnụnọ ụlọ ọrụ nnọchi anya Assange. Onye hiwere WikiLeaks agbachiri n'ụlọ ọrụ nnọchi anya mba Ecuador n'afọ ise.
E kwuru na ụlọ ọrụ ndị mba ọzọ nke UK jụrụ arịrịọ sitere n'aka Quito ka o nye gị ọnọdụ onye nnọchi anya ya. A kọrọ na enyere ya paspọtụ ahụ na Disemba 12.
Mịnịsta okwu mba ofesi Ecuador Guillaume Long, kwuru na mba ahụ na-achọ “ụzọ dị ùgwù na ikpe ziri ezi” na gọọmentị UK maka okwu Assange. Ọ gbakwunyere na Assange agaghị ahapụ ụlọ ọrụ nnọchi anya obodo Ecuador ebe enweghị nchekwa nchekwa.
Ekwedọọ na-enyekarị kaadị NJ dị otú ahụ maka ndị na-azọrọ ọnọdụ obibi, nke a na-akpọ cedulas. Nzukọ Vienna na mmekọrịta mba na mba na-ekwu na onye nwere paspọtụ diplọma enweghị mkpesa. Otú ọ dị, ọ ka bụ nkwa.
Assange bi na ụlọ ọrụ nnọchi anya Ecuador na London kemgbe afọ 2012, mgbe e boro ya ebubo mwakpo mmekọahụ na Sweden. Agbanyeghị na ndị ọka iwu Sweden ahapụla ebubo a, ndị uwe ojii Britain ka nọ na mpụga ụlọ ọrụ ndị nnọchi anya gọọmentị dị njikere ijide onye nyocha nke WikiLeaks maka imebi ọnọdụ mgbapụta 2012 ya Assange jụrụ inyefe ndị ọchịchị Britain, na-atụ egwu na ha ga-akpọghachite ya na United States ebe ọ na-atụ anya na a ga-ekpe ya ikpe maka ọrụ aghụghọ ya.